musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » Sandals Beaches uye Resorts Kutengeswa kweHalloween
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuvhuna Grenada Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Kuvhuna Saint Lucia Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Kuvakazve • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Sezvo chiri chipo chakakosha chevashanyi vashanyi, Sandals Beaches uye Resorts Halloween Kutengesa inopa yemahara yerudo yakavanzika kenduru mwenje wekudya kwemaviri. Vakaroorana vachange vakagara patafura yakanyatso shongedzwa ne tropical maruva akarongeka uye ichipenya nemwenje.
Chikafu chechina-gourmet chikafu chinozopihwa newaiter wega uye chinosanganisira bhodhoro reRuffino Prosecco uye zvisingagumi zvinodururwa zveRobert Mondavi Twin Oaks® waini.
Vashanyi vese vanofanirwa kuita kutora nzvimbo yavo yesarudzo kuti vatore mune ino yemahara inonakidza chiitiko chemanheru.
Inowanikwa pazvitsuwa zveAntigua, Bahamas, Barbados, Grenada, Jamaica, uye Saint Lucia, vashanyi vanogona kutora mabhuku, kunyoresa, uye kutarisa mukati:
Shangu dzeRoyal Barbados
Shangu Halcyon Gungwa
Shangu dzeOchi Beach Resort
Shangu dzekuSouth Coast
Shangu Montego Bay
Sandals Royal Kudyara
Iyi yemahara yakavhenekerwa yemwenje yekudya kwemanheru kwemaviri inowanikwa kana uchitsvaga 6 yakabhadharwa husiku kana kupfuura. Vashanyi vanofanirwa kunyoresa kwavo kubhuka kuti vagamuchire ichi chakakosha kudya kwemanheru kuburikidza nefomu rekunyoresa rakatumirwa mukati maawa makumi manomwe nemaviri ekubhuka.
Vashanyi vakatochengeterwa - musatye! Ivo vanogona kutora mukana weichi chikumbiro zvakare zvakare nyore nekunyoresa.
Kubva panguva iyo vashanyi vanosvika kunzvimbo dzekuchengetedza nhandare, kusvika kune rese re-resort chiitiko, maSandals anoda kuti vashanyi vavo vanzwe vakachengeteka uye vanakidzwe nekushushikana kwezororo. Kunyangwe zviri kuitika munyika nhasi, vashanyi vanogona kuzorora vachiziva Sandals Platinum Protocol yeUtsanana iri kushanda kunzvimbo dzadzo dzese dzekuzorora.
Saka usatya ... bhuku neSandals Beaches uye Resorts uye uvagamuchire iwe kuParadhiso.